Swayipha umlingo ngumdlalo wobuchule wokuphosa ngomlingo | I-Androidsis
Swayipha uMlingo ngumdlalo oqhelekileyo apho kufuneka sizobe inkitha yeemilo zejiyometri ngezijekulo ezikrinini ukuphosa iintlobo ezahlukeneyo zamakhubalo anamandla kutshaba. Utshaba olungayi kuyeka kwimizamo yalo yokusizisa esiphelweni seentsuku zethu ngokufa kwethu.
Umdlalo omnandi, nangona kuwo Uxinzelelo luhamba nolonwabo inokubangela. Kwaye kuya kufuneka sikhawuleze ngokwaneleyo ukuba sizobe ezo zimbo zomzimba kwiscreen ngaphambi kokuba uninzi lweentshaba lusihlasele oluza kuphehlelelwa ngumphathi ngamnye esidibana naye.
1 Ngeempawu zomzimba uya kuphumelela
2 Khetha oosiyazi abahlukeneyo kwiSwipe Magic
3 Umdlalo onomdla kwaye unzima
Ngeempawu zomzimba uya kuphumelela
Umdlalo wokudlala weSwipe Magic ulula kakhulu. Uneligorha lakho elibekwe kwicala lasekhohlo kwesikrini, ngelixa kwelinye icala sinomphathi wotshaba. Lo uya kuzama ukuphosa onke amajoni akhe kuwe ukuze akubulale. Kuya kufuneka uphendule ngokuzoba iimilo zejiyometri ngezimbo zomzimba eziveliswe kwiscreen.
Njengoko ubiza iintlobo ezintsha ibar yomlingo iya kutshona. Xa igqityiwe, ungaphosa ispell esinamandla kumphathi wotshaba nakulo lonke iqela lamajoni aya ngqo kuwe. Ezi milo zejiyometri ziya kugqitywa ngakumbi, ke kuya kufuneka ulungiselele ukuzoba ngokukhawuleza njengoko uyibona kwiscreen, kuba, kungenjalo, uya kuphulukana namanqaku obomi de ibar yamandla inyamalale kwaye ufe.
Ubunzima bulele ekwazini zoba ezo milo zejiyometri ngezandla, ngokungathi uvula iselfowuni yakho kwiminyaka embalwa edlulileyo. Njengoko sihamba ngokwamanqanaba ahlukeneyo, ii-vertices ezintsha ziya kongezwa ezenza ukuba sidwebe imigca emininzi, ukuze ufumane umbono wobunzima obuzothatha ukushenxisa abaphathi kumanqanaba aphezulu.
Khetha oosiyazi abahlukeneyo kwiSwipe Magic
Swayipha umlingo ngumdlalo oqhelekileyo okumema ukuba ube nexesha elihle lemizuzu embalwa. Ngomnye wale midlalo unokufumana 'ucaphukisiwe', kuba ukuba awukwazi ukuzoba ngokukhawuleza imilo yejiyometri ukwenza isipelingi, uyakubona ukuba kwimizuzwana nje ubomi bakho buqala ukwehla bude buphele ngokufa.
Ukuba koku sidibanisa ntengiso izakuvela kanye emva kokoyiswa kwakho, imithambo-luvo iya kuqala ukuphakama ukuqala ukucinga ukuba kufanelekile na ukudlula kule "ntlungu incinci". Akukho nto yenzekayo, kuba sizokwazi iimilo zejiyometri ezahlukeneyo kwaye njengoko sidlala ngakumbi siya kuba nakho ukuloba ngasekhohlo nasekunene ukuphelisa bonke abo baphathi bakhulu.
Into ekufuneka uyenzile kuku zama ukuvula iiwizard ezintsha oko kuya kuququzelela umsebenzi wokuguqula ukubandezeleka okuncinci kube yinyathelo ngaphandle kobunzima obuninzi, nangona oku kungayi kuba lula ukufezekisa.
Umdlalo onomdla kwaye unzima
Eyona nto icaphukisayo yintengiso esiza kuyifumana kwaye inokuba noburhalarhume. Ngokubhekisele kumdlalo wokudlala, uphumelele, nangona kunjalo ukusuka kwinqanaba lesibini Kufuneka sikhawuleze ukudweba ukuze singagwetywa.
Ngokobuchwephesha ngumdlalo usebenze kakuhle ngaphandle kokuzonwabisa. Baye bazama ukuba eyona nto iphambili ngokuswayipha umlingo kukwimilo yokuthakatha kunye nezo zejometri. Ukuba uyakwazi ukuba ngumdlali onesakhono sokuzoba, ngokuqinisekileyo uya kuba lula. Isitayile esibonakalayo sipholile ngogqabhuko-dubulo kunye nefuthe elibi lokutshisa ezo ntshaba.
Swipe Magic ngumdlalo wesakhono apho kufuneka sizobe iimilo zejiyometri ngezimbo zomzimba. Unayo yasimahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle kunye nee-micropayments ezingenakuphepheka zokuphelisa intengiso kunye nezinye izinto esiqhele ukuzenza. Siyakushiya kunye noDuet, Umdlalo nawo wobuchule kwaye oya kubeka ukucinga kwakho kuvavanyo.
Umdlalo opholileyo upholile
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Phosa iziphako ezinamandla ngokuzoba iimilo zejiyometri ngezimbo zomzimba kwiSwipe Magic
Ungayitshixa njani ifowuni ye-Android ebiweyo